မြစ်ဆုံပွဲစား ကူမြူနစ် ကြေးမုံဂျီး မကြားလိုသော တိန်အင်းန်မင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » မြစ်ဆုံပွဲစား ကူမြူနစ် ကြေးမုံဂျီး မကြားလိုသော တိန်အင်းန်မင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉)
မြစ်ဆုံပွဲစား ကူမြူနစ် ကြေးမုံဂျီး မကြားလိုသော တိန်အင်းန်မင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉)
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Nov 27, 2017 in Best Web Awards, History | 1 comment
တိန်အင်းန်မင် ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ သိကောင်းစရာ အချက် ၆ချက် …….
လွန်ခဲ့သော ၂၈နှစ် ဗုဓဟူးနေ့ တနေ့တွင် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ ဆန်ဒပြသမားများ သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ စခန်းချရာ ပီကင်းမြို့ရှိ ရင်ပြင်ကို တရုတ်စစ်တပ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရွေ့ ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲမှ သတ်ဖြတ်ခံရသူ အရေအတွက် မသိရဘဲ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပစ်သတ်ခံရဟု ခန့်မှန်းကြပြီး ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်ခွင့် တောင်းဆိုမှုများကို ချုပ်ငြိမ်းစေခဲ့သည်။ ရာစုနှစ် တစိတ် ကြာပြီးနောက် ဇွန်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အရေးအခင်းအား တရုတ်အစိုးရ၏ နှံ့စပ် စီစစ်စွာ အသေးစိတ် ဖုံးကွယ်မှုကြောင့် ရံဖန်ရံခါ ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ညဏ်ဝယ် တင့်ကား တစင်းရှေ့ အာခံ မတ်တပ်ရပ်နေသော လူတဦး၏ ပုံရိပ်ထက်ပို သတိရကောင်းမှန်း မသိတော့ပေ။ ။။။။။။
နာကြည်းဝမ်းနည်းဖွယ် နေ့များ၏ ခံစားချက်၊ ဖြစ်ရပ်၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ၁၉၈၉ ဇွန် ၁၂ ထုတ် မျက်နှာဖုံးသတင်း အပါအဝင် အဲဒီအချိန် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် ဖေါ်ထုတ်တင်ပြမှု များမှ ဆွဲထုတ်ရင်း သမိုင်းနောက်ပြန် ရောက်ခဲ့ရသည်။ သတင်းဆောင်းပါးများပါ အသေးစိတ် အချက်အလက် ပုံရိပ် ဖြစ်ရပ်များမှာ ၂၈နှစ် ကြာပြီးနောက် မှေးမှိန်ကုန်သည်။ အချိန်ကာလကြောင့် မြေမြှုပ် ပျောက်ကွယ်ခံနေရသော အဓိကအချက် ၆ချက်မှာ…. …
ဒီတပွဲထဲ မဟုတ် …….
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိုအချိန်၌ လူတသန်းအထိ တခဲနက် ပါဝင်ကြောင်း သတင်းများပေးပို့သည့် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူထုဆန်ဒပြပွဲ တခုမျှသာ မဟုတ်ပေ။ လူထုဆန်ဒပြပွဲများမှာ တရုတ်အကြီးဆုံးမြို့ကြီး ရှန်ဟဲ အပါအဝင် မြို့ရာပေါင်းများစွာသို့ ပြန့်နှံ့သွားပြီး ပီကင်းသို့ စစ်တပ် ဝင်ရောက်သော ရက်များတွင် ရှန်ဟဲ၌ ဆန်ဒပြသမားများ အတားအဆီးများ ချကာ ပိတ်ဆို့နေကြသည်။ ။။။။
သေချာတာက လူထုဟစ်တိုင်ကွင်း တည်နေရာ ပီကင်းရှိ ရင်ပြင်ဟာ ဆန်ဒပြသမားများနဲ့ ဒါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြည့်နှက်နေခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော်တုံးက တိန်အင်န်မင် အရေအခင်းလို့ လူသိများပြီး သူ့လောက် မပြင်းထန်သော ဆန်ဒပြသူများအား အလားတူ ဖြိုခွဲမှုကြောင့် လူထု ဒေါသအမျက် ထွက်ကာ နိုင်ငံထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အရွှေ့အပြောင်း လုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ တိန်အင်န်မင် ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ အပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာ ထုတ်ဝေသော တင့်ကားလူသား သတင်းတွင် တိုင်းမ် မက်ဂဇင်းမှ ယခုလို ဖေါ်ပြသည်…. ….
” တိန်အင်န်မင် ရင်ပြင်သည် “အလယ်ခေတ် ဘုရင့်နိုင်ငံ အသဲနှလုံး၊ ၁၉၁၉ခုနှစ် ကျောင်းသားများ ဆန်ဒပြခဲ့ရာနေရာ (မေလ၄ရက် လှုပ်ရှားမှု တစိတ်တပိုင်း)၊ ၁၉၄၉ခုနှစ် တွင် မကြောက်မရွံ့ ရပ်တည်ခဲ့သော ပြည်သူများကိုယ်စား မော်စီတုံး ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံ ကြေငြာခဲ့ရာ နေရာ နှင့် ခေါင်းဆောင်များ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး ဂုဏ်ပြုတပ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုရာ နေရာ” တင်စားရမည့် ပြည်သူ့အာဏာ ဖေါ်ကြူးထားသော စိတ်တဇ ကျောက်တိုင် အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည်။ ။။။။။
လူသတ်ပွဲ အချက်အလက်များကို တရုတ် အာဏာပိုင်များ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်နေဆဲ ……
လူသတ်ပွဲ ပြီးလို့ ရာစုနှစ် တစိတ်ကျော် ကြာသည့်တိုင် အွန်လိုင်းဆင်ဆာ နှစ်သန်း ပြုလုပ်တပ်ဆင်ထားသော တရုတ်အစိုးရရဲ့ အင်အားကောင်းလှတဲ့ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရေး ကိရိယာကြီးနဲ့ ဆန်ဒပြပွဲ သတင်းအချက်အလက်များကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ဆို့ထားဆဲ ရှိသည်။ တိန်အင်န်မင် ရင်ပြင် စာလုံးကို ရှာမရရုံတင်မက ဆက်စပ် စာလုံး၊ စာပိုဒ်များအားလဲ ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၁၉၈၉ ဇွန် ၄ ဆန်ဒပြပွဲနေ့ရက်ကို သွယ်ဝိုက် ရည်ညွှန်းနိုင်သော နံပါတ်အတွဲ ၆ ၄ ၁၉၈၉ ကိုပင် အာဏာပိုင်များ ချမ်းသာ မပေးပါ။ ထိုကြောင့်ပဲ ကဗာ့ အွန်လိုင်း အသုံးပြုဆုံး နိုင်ငံရှိ လူများစွာတွင် သွေးထွက်သံယို ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှု အကြောင်း အမှတ်ရ တင်မကျန်ခဲ့ချေ။ ။။။။။
အနောက်ဖက် မလွယ်ပေါက်ကနေ ဝင်ခဲ့ရတဲ့ ဂေါ်ဘာချက်
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်မှာ ပထမဆုံး ရောက်လာတဲ့ တရုတ်ကူမြူနစ် ပြိုင်ဖက်ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်ရဲ့ မီခေးလ် ဂေါ်ဘာချက် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်အတွင်း ကန့်ကွက်ဆန်ဒပြပွဲ ဖြစ်ပွားလို့ တရုတ်အစိုးရ အရှက်ကွဲရသည်။ တရုတ်တို့က မေလတွင် ရင်ပြင်အစွန်းရှိ မဟာခန်းမဆောင်ထဲ နိုင်ငံတော် ပန်းခြင်းနဲ့ ကြိုဆိုရန် စီစဉ်ထားစဉ် ကန့်ကွက်ဆန်ဒပြပွဲ အရှိန်အဟုန်နှင့် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ ဂေါ်ဘာချက် ခမျာ အနောက်ဖက် မလွယ်ပေါက်မှ ဖြတ်သန်းဝင်ကာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။ ။။။။
စစ်တပ် ပစ်ခတ်တဲ့ တဖက်သတ် ရက်စက်ပွဲ ……
ဇွန် ၄ နံနက်စောပိုင်းတွင် ထရပ်ကား ၅ဝ နှင့် အင်အား တသောင်းရှိ စစ်တပ် လမ်းများပေါ် ခွာသံပြင်းပြင်းရိုက် ရောက်လာကြောင်း ရက်အနဲငယ်အကြာတွင် တိုင်းမ်းမှ သတင်းပေးပို့သည်။ အရပ်သား ဆန်ဒပြသူများထက် များစွာပို အင်အားကြီးမားသော စစ်တပ်က လူအုပ်ထဲကို စတင်ပစ်ခတ်ရာ ဆန်ဒပြသူအချို့မှ ကြံ့ကြံခံ ခုံခံပြီး ကျောက်ခဲများ၊ ဓါတ်ဆီပုလင်းများ မီးရှို့ပစ်ပေါက်ကြသည်။ သူတို့မှ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်သည်များလည်း ရှိခဲ့ရာ အရပ်သား တဦးကို ပစ်သတ်သော စစ်သားနှစ်ဦးအား ဆန်ဒပြသမားတို့ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ကြောင်း သတင်း ထွက်လာသည်။ အခြားဖြစ်ရပ် တခုတွင် စစ်သည်တင် သံချပ်ကာကားအား ဆန်ဒပြသူတို့ အလံများနျှင့် ဖုံးအုပ်ရွေ့ မီးတင်ရှို့သဖြင့် အထဲရှိ စစ်သား ရှစ်ဦး (သို့) ကိုးဦး ပိတ်မိနေခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုများကို တမနက်လုံး ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်တော့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဒီမိုကရေစီရေး အိမ်မက်မှာ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် အိမ်မက်ဆိုး ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဆရာဝန်တဦးမှ ထိုအချိန်က ပြောရာတွင် အနည်းဆုံး ငါးရာ သေဆုံးသည်၊ ရေဒီယို အသံလွှင့် ကြေငြာသူ တဦးကမူ တထောင် ရှိမည် ဆိုသည်။ ။။။။။
မွေးထားတဲ့ နတ်သမီး အသတ်ခံရ …..
ရင်ပြင်ကို ဝင်မစီးနင်းခင် ရက်ပိုင်းအလိုတွင် လစ်ဘာတီရုပ်တု တစိတ်တပိုင်း ဆင်တူသော ဒီမိုကရေစီ နတ်သမီး ရုပ်တုကို ထုလုပ်စိုက်ထူခဲ့သည်။ အမြန်ပြုလုပ်ထားသေ ပေသုံးဆယ် ရုပ်ထုမှာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု သင်္ကေတ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လွယ်လင့်တကူ ဖြိုဖျက်မရအောင် ထုထည်ကြီးမားထားသည်၊ အနည်းဆုံးတော့ အာဏာပိုင်များကို မျက်နှာပျက် အရှက်ကွဲစေသည်။ ရင်ပြင်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် တင့်ကားများနှင့် နတ်သမီးရုပ်ကို ဖြိုဖျက်ချေမွ ပစ်လိုက်ကြောင်း တိုင်းမ်မှ သတင်းပို့သည်။ ။။။။။
တင့်ကားလူသား ဘယ်သူလဲ …..
အံ့ချီးကုန်နိုင်ဖွယ် လေးစားထိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို တွေ့မြင်သူ ဦးရေဟာ ဝင်စတ်ချာချီ၊ အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း နဲ့ ဂျိမ်းစ် ဂျွိုက်စ်တို့အားလုံးပေါင်း ကြည့်ဖူးသူများထက် ပိုများတယ် လို့ တိုင်းမ် မှာ တင့်ကားလူသား အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရသူမှာ လူသတ်ပွဲပြီး နောက်တနေ့ ဇွန် ၅ တင့်ကားစစ်ကြောင်းရှေ့ ပိတ်ရပ်နေသော ဓါတ်ပုံထဲက အမည်မသိ အညတရ လူတဦး ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အခြား ဆန်ဒပြဖေါ်တဦးမှ အလျင်အမြန် ဆွဲထုတ်သွားပြီး လူအုပ်ထဲ တိတ်တဆိတ် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောလာဟာဠများသာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး နောက်တနှစ်အကြာ တရုတ်ခေါင်းဆောင် ကျန်ဇီမင်းအား အဲဒီလူငယ် ဘာဖြစ်သွားလဲ သိလားလို့ မေးတဲ့အခါ “သူလုံးဝ အသတ်မခံရဘူး” ငါထင်တယ် ဟုသာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ။။။။
အဟုတ်တရုတ် ခြစ်ကြေးမုံဂျီးဘဲ မဟုတ်တရုတ် ကြောင်ကြီး <3
Updated: May 19, 2016 12:06 PM ET | Originally published: Jun 04, 2014
Twenty-five years ago Wednesday, Chinese troops violently retook the square in Beijing where pro-democracy protesters had set up camp for weeks. The Tiananmen Square massacre left an unknown number dead, with some estimates in the thousands, and smotheredademocratic movement. But afteraquarter-century—andathorough attempt by the Chinese government to conceal the events that unfolded that June—our collective memory is sometimes limited to not much more than an image ofaman defiantly standing in front ofatank.
So TIME went back in history to pull out the details, context and feelings of those grim days from our own unfolding coverage at the time, includingacover story from the June 12, 1989 issue. The articles give color, detail and context that are sometimes lost 25 years later. Here are five key facts that may have been buried in time:
It wasn’t the only protest
The demonstrations in Tiananmen Square, which at one point had reportedly ballooned toamillion people, were not the only pro-democracy protests in the country at the time. Demonstrations had spread to hundreds of cities, including Shanghai, China’s largest, and in the days after the military mobilized in Beijing, protesters were putting up blockades in Shanghai.
Inareport on the “Tank Man” several years after the Tiananmen Square massacre, TIME described the Square as:
Tiananmen Square–the very heart of the Middle Kingdom, where students had demonstrated in 1919 [as part of the “May Fourth Movement”]; where Mao had proclaimeda“People’s Republic” in 1949 on behalf of the Chinese people who had “stood up”; and where leaders customarily inspect their People’s Liberation Army troops—isavirtual monument to People Power in the abstract.
Chinese authorities still censor information about the massacre
Gorbachev entered through the back door
The protests presented an embarrassing pickle for the Chinese government duringavisit from the Soviet Union’s Mikhail Gorbachev, the first visit fromaleader of China’s communist peer in 30 years. The Chinese had scheduledastate banquet in the Great Hall of the People at the edge of the Square in May, as the protests raged. Gorbachev ended up having to go through the back door.
When the military opened fire,alopsided battle ensued